राती भन्दा बिहानीपख सेक्स गर्नु उत्तम ! Kasthamandap Daily
विज्ञहरू भन्छन् सेक्स गर्ने निश्चित समय नै हुँदैन । उपयुक्त समय र परिस्थिति अनुसार सेक्स गर्न सकिन्छ ।
अमेरिकाको एक शोध वैज्ञानिक र सेक्स सलाहकार डा। डेबी हरबेनिकले एक अनुसन्धानको क्रममा सेक्सको सबैभन्दा उत्तम समय विहान नै रहेको पत्ता लगाए । डा। डेबीका अनुसार विहानको समयमा सेक्स गर्दा हाम्रो शरिरबाट निस्कने केमिकल्सबाट धेरै सन्तुष्टि मिल्छ । जसबाट खुसी मात्रै होइन स्वस्थ पनि भइन्छ ।
कति पटकसम्म गर्ने सेक्स ?
तर, खाना खाएर सेक्स गर्नु र खाना खाएर नुहाउनु भनेको रोग निम्ताउनु हो । त्यसैले रातीमा सेक्स गनुभन्दा विहान मै गर्दा राम्रो हुने विज्ञहरुको सुझाव छ । रातीको सेक्समा नयाँपन नहुने पनि बताउने गरिएको छ । एजेन्सीहरुको सहयोगमा